တရုတ်ချောမွေ့စွာကာဗွန်သံမဏိနှင့်အလွိုင်းစက်မှုပြွန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | ရွှေ Sanon
စံ: ASTM A519-2006
grade Group မှ: 1018,1026,8620,4130,4140
technique: Hot ရှင်းပြီသို့မဟုတ်အေးရှင်းပြီ
အပူကုသမှု: Annealing / Normal / စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်သက်သာရာ
ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်စက်မှုနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ cylinders.include ကာဗွန်နှင့်အလွိုင်းသံမဏိချောမွေ့စွာစက်မှုပြွန်အောင်ဖို့အသုံးပြုများနှင့်အထိအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်ချောမွေ့စွာပူ-ချောစက်မှု Tube နှင့်စပ်ရာမရှိသောအအေး-ချောစက်မှုပြွန်နှစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့် 12 3/4 အပါအဝင်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ လိုအပ်သောအဖြစ် (323.8 မီလီမီတာ) သည်မြို့ရိုးနှင့်အတူလှည့်လည်ပြွန်များအတွက်အပြင်ဘက်အချင်း thicknesses ။
TABLE အနိမျ့-ကာဗွန်သံမဏိ 1 ဓာတုလိုအပ်ချက်များ
သတ်မှတ်ရေး ကာဗွန် တစ်ဦးက မန်းဂနိစ် B က phosphorus, B က ဆာလဖာ, B က
max ကို max ကို
MT က X 1015 0.10-0.20 0.60-0.90 0,04 ၀.၀၅
MT 1010 0.05-0.15 0.30-0.60 0,04 ၀.၀၅
MT 1015 0.10-0.20 0.30-0.60 0,04 ၀.၀၅
MT 1020 0.15-0.25 0.30-0.60 0,04 ၀.၀၅
MT က X 1020 0.15-0.25 0.70-1.00 0,04 ၀.၀၅
B က န့်သတ်ချက်များအပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လျှောက်ထား; 6.1 ခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့်အဖြစ် မှလွဲ. ထုတ်ကုန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဇယား5မှာပေးတဲ့သက်ဆိုင်သောနောက်ထပ်သည်းခံစိတ်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
TABLE အခြားကာဗွန်သံမဏိ2ဓာတုလိုအပ်ချက်များ
0.10 max ကို
ဒီ table ထဲမှာပေးထားသောတစ်ဦးကအဆိုပါပ္ပံနှင့်ကန့်သတ်အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လျှောက်ထား; လိုအပ်သောအဖြစ် မှလွဲ. 6.1 , ထုတ်ကုန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဇယားနံပါတ်5မှာပေးတဲ့သက်ဆိုင်သောနောက်ထပ်သည်းခံစိတ်-ances မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
TABLE အလွိုင်းသံမဏိ3ဓာတုလိုအပ်ချက်များ
ဒီဇယား 1-အဆိုပါပ္ပံနှင့်ကန့်သတ် 200 ထက် ကျော်လွန်. မသံမဏိသက်ဆိုင်ပါသည်။ 2(1290 စင်တီမီတာ 2) Cross-Section ဧရိယာထဲမှာ။
အချို့သောဒြပ်စင်၏ 2-အသေးစားပမာဏသတ်မှတ်ထားသို့မဟုတ်မလိုအပ်လျက်ရှိသောအလွိုင်းသံမဏိအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဒြပ်စင်ဖွစျပှားအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ်
အောက်ပါအများဆုံးပမာဏမှပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်သည်: ကြေးနီ, 0.35%; နီကယ်, 0.25%; ခရိုမီယမ်, 0,20%; molybdenum, 0.10% ။
ဒီ table ထဲမှာပေးထား 3-အဆိုပါပ္ပံနှင့်ကန့်သတ်အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လျှောက်ထား; လိုအပ်သောအဖြစ် မှလွဲ. 6.1 , ထုတ်ကုန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသက်ဆိုင်ရာမှဘာသာရပ်များမှာ
စားပွဲတင်နံပါတ်5မှာပေးထားတဲ့အပိုဆောင်းသည်းခံစိတ်။
gradeတစ်ဦးက , B က ဓာတုရေးစပ်သီကုံးမှုန့်သတ်ချက်များ%
ကာဗွန် မန်းဂနိစ် ဖော့စဖော့ ဆာလဖာ, ကို C, D ကို ဆီလီကွန် နီကယ် ခရိုမီယမ် Molybde-
ရု, ကို Cmax ကို max ကို NUM
52100အီး 0.93-1.05 0.25-0.45 0,025 0,015 0.15-0.35 0.25 max ကို 1.35-1.60 0.10 max ကို
6120 0.17-0.22 0.70-0.90 0,04 0,04 0.15-0.35 ... 0.70-0.90 0.10 မိနစ်
6150 0.48-0.53 0.70-0.90 0,04 0,04 0.15-0.35 ... 0.80-1.10 0,15 မိ
B က ထိုကဲ့သို့ 50B40 အဖြစ်အက္ခရာ B ကိုနှင့်အတူဤဇယားတွင်ပြသအတန်း, 0,0005% အနည်းဆုံးဘိုရွန်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ A Grades shown in this table with prefix letter E generally are manufactured by the basic-electric-furnace process. All others are normally manufactured by the basic-open-hearth process but may be manufactured by the basic-electric-furnace process with adjustments in phosphorus and sulfur.
ကို C အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအသီးအသီးဖြစ်စဉ်ကိုများအတွက် phosphorus ကိုဆာလဖာကန့်သတ်နေသောခေါင်းစဉ်:
အခြေခံပညာလျှပ်စစ်မီးဖိုထဲ 0,025 max ကို% အက်ဆစ်လျှပ်စစ်မီးဖိုထဲ 0,050 max ကို%
အခြေခံပညာပွင့်လင်းထင်းမီး 0,040 max ကို% အက်ဆစ်ပွင့်လင်းထင်းမီး 0,050 max ကို%
: D အနည်းဆုံးနှင့်အများဆုံးဆာလ်ဖာအကြောင်းအရာ resulfurized သံမဏိဖော်ပြသည်။
အီး ဝယ်ယူအောက်ပါအများဆုံးပမာဏသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်: ကြေးနီ, 0,30%; လူမီနီယံ, 0,050%; နှင့်အောက်စီဂျင်, 0,0015% ။
ကာဗွန်နှင့်အလွိုင်းသံမဏိ၏ပိုအဖြစ်များသည့်အတန်းအချို့များအတွက်ပုံမှန်ဆန့ Properties ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ Thermal အခြေအနေ
CW-အေး SR-စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်သက်သာရာရ A-Annealed N-NormalizedA အောက်ပါအလုပ်လုပ်ခဲ့အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများများအတွက်သင်္ကေတအဓိပ္ပါယ်နေသောခေါင်းစဉ်: HR-ဟော့ Rolls
grade အခြေအနေ အဆုံးဖြစ်သော အထွက်နှုန်း elongated Rockwell,
Desig- tion တစ်ဦးက ခွန်အား ခွန်အား2၌တည်၏။ သို့မဟုတ် ခိုင်မာသော
လူမျိုးသည် 50 မီလီမီတာ% B ကစကေး
တစ်ဦးက 48 331 28 193 30 50
N ကို 55 379 34 234 22 60
တစ်ဦးက 53 365 30 207 25 57
N ကို 55 379 36 248 22 60
တစ်ဦးက 60 414 33 228 25 67
N ကို 65 448 40 276 20 72
တစ်ဦးက 65 448 35 241 20 72
N ကို 75 517 48 331 15 80
တစ်ဦးက 68 469 38 262 18 74
N ကို 78 538 50 345 12 82
တစ်ဦးက 50 345 30 207 25 55
N ကို 55 379 35 241 20 60
တစ်ဦးက 65 448 35 241 22 72
N ကို 70 483 43 296 15 75
တစ်ဦးက 75 517 55 379 30 81
N ကို 90 621 60 414 20 89
တစ်ဦးက 80 552 60 414 25 85
N ကို 120 855 90 621 20 100
က Round Hot-ပြီးဆုံး Tube များအတွက်ပြင်ပမှာအချင်းသည်းခံစိတ် တစ်ဦးက , B က, ကို C
ပြင်ပမှာအချင်းအရွယ်အစား Range, အတွင်းပြင်ပရှိအချင်းစာနာထောက်ထားရေး။ (မီလီမီတာ)
2.999 (76.17) အထိ
B ကပူချောပြွန်၏အရွယ်အစား၏ဘုံအကွာအဝေး 1 1/2 အတွက်။ (38.1 မီလီမီတာ) 10 မှ 3/4 အတွက်။ (273.0 မီလီမီတာ) နံရံအထူနှင့်အတူအပြင်ဘက်အချင်းအပြင်ဘက်အချင်းအနည်းဆုံး 3% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပေမယ့်မလျော့နည်း 0,095 ထက်၌တည်၏။ (2.41 မီလီမီတာ) ။
ကို C ပိုကြီးသောအရွယ်အစားရရှိနိုင်ပါသည်; အရွယ်အစားနှင့်သည်းခံစိတ်ဘို့ထုတ်လုပ်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
က Round Hot-ပြီးဆုံးဘို့နံရံအထူသည်းခံစိတ်
မြို့ရိုးကိုအထူစာနာထောက်ထားရေး, တစ်ဦးက ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျော်
အသက် 15 နှစ်အောက်
။ တစ်ဦးကအမှတ်တရအထူသည်းခံစိတ်နံရံများ 0,199 အတွက်သက်ဆိုင်ဖြစ် (5.05 မီလီမီတာ) နှင့်မနည်းမည်အကြောင်း, ထိုကဲ့သို့သောပြွန်အရွယ်အစားပေါ်မြို့ရိုးကိုသည်းခံစိတ်ဘို့ထုတ်လုပ်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
အပြင်ဘက်အချင်းများနှင့်နံရံအထူအတွက်စက်မှု Tube-မူကွဲဇယားထဲမှာသည်းခံစိတ်ထက်မပိုရကြလိမ့်မည်ကြမ်းတမ်း-လှည့်။ စားပွဲတင်အဖုံးများသည်းခံစိတ်အပြင်ဘက်အချင်းများနှင့်နံရံအထူဖို့လျှောက်ထားခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားသက်ဆိုင်အဖြစ်။
အပြင်ဘက် diam-eter အတွက်မြေပြင်စက်မှု Tube-မူကွဲဇယားထဲမှာသည်းခံစိတ်ထက်မကျော်လွန်စေရမည်။ ဒီထုတ်ကုန်ပုံမှန်အားဖြင့်အအေးမိ-အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြွန်ကနေထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
အရှည်-စက်မှု Tube လေ့ကျော်ကြိတ်အရှည်,5ပေ (1.5 မီတာ) နှင့်ပရိဘောဂအစုံအလင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောလာသောအခါချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖြတ်အလျားနှစ်ဆယ်နေကြသည်။ အရှည်သည်းခံစိတ်ဇယားမှာပြနေကြသည်။
ခိုင်မာသောကန့်သတ်လိုအပ်သည်သောအခါ, ထုတ်လုပ်သူတိုင်ပင်ရလိမ့်မည်။ ပုံမှန် Hard စားပွဲတင်ကြောင့်စာရင်းဝင်နေသောခိုင်မာသောစမ်းသပ်ပြွန်၏ 1% အပေါ်ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်သတ်မှတ်ထားသော။
ဆန့ဂုဏ်သတ္တိများလိုအပ်သည်သောအခါ, ထုတ်လုပ်သူတိုင်ပင်ရလိမ့်မည်။ ပိုဘုံအဆင့်နှင့်အပူအခြေအနေများအချို့များအတွက်ပုံမှန်ဆန့ဂုဏ်သတ္တိများ table ထဲမှာစာရင်းသွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
nondestructive ultrasonic သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်သံလိုက်စမ်းသပ်မှုတွေအမျိုးမျိုးအမျိုးအစားများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်ရာတွင်အသုံးပြုခံရဖို့နှင့်စစ်ဆေးရေးကန့်သတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဝယ်ယူသဘောတူညီချက်အားဖြင့်တည်လိမ့်မည်။
ယခင်: ချောမွေ့စွာ, welded နှင့်ပူ-သို့ကျဆင်းလာသွပ်ရည်စိမ်ပိုက်
နောက်တစ်ခု: အမြင့်ဖိအားဘွိုင်လာချောမွေ့စွာသံမဏိပိုက်များအတွက်နယူး Delivery